SomaliTalk.com » Barnaamij Caafimaad oo ku saabsan Halista Sigaarka
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Monday, October 11, 2010 // Jawaabaha waa la xiray
Qoraalka oo Sawirro wata ka daalaco: Qaab Magazine ah ama Qaab PDF ah
sigaarku halkay ka timid asal ahaan?
Ururka caafimaadka adduunka (WHO )ayaa ku waramay in sanadkii 1998ki dad gaarayay 1.235 bilyan oo qof ay cabbayeen sigaarka, iyadoo dadka dunida tiradooda ay ahayd 5.926 bilyan oo qof, tiradaas dadka cabba sigaarka ayaa sii kordhayso, waxaana la filayaa in sanadka 2020ka ay gaarto 1.671 bilyan oo qof.
Walxaha ku jira sigaarka:
1-	Qaybta tooska ah: waa qiiqa uu liqayo qofka cabayo sigaarka, oo ah 15% xaddiga qiiqa ka baxayo sigaarka, waxa ayna ka koobantahay walxo si dhaqso ah loo gubay, sidaa awgeed isu uruursanaantoodu way yartahay ilaa xad.
Halista caafimaad ee walxaha ku jira tubaakada/sigaarka
1	Noocyo badan oo kansar ah, gaar ahaan kansarka sambabada, kilyaha, cunaha, madaxa iyo dhuunta, kansarka naasaha, kaadi haysta, hunguriga, ganaca iyo caloosha. Waxaa kale oo jira caddeymo muujinaya halista kansarka dhiigga ku dhaca ee (leukemia) loo yaqaan, kansarka nooca loo yaqaan (squamous cell carcinoma) ee ku dhaca duleelada sanka, kansarka beerka, lafaha, dhuunta iyo qeybta hoose ee mindhicirrada iyo dabada, kansarrada xameetiga, qanjidhka loo yaqaan adrenal gland iyo mindhicirrada yar yar.
2	Cudurrada wadnaha iyo wareegga dhiigga.
•	Xanuun kadis ah oo maskaxda ku dhaca oo jirka qaarkiis hawl gab kadhiga (stroke).
•	Cudurrada xididdada dhiigga ee darafka (peripheral vascular disease )
•	. Cudurrada neefmareenka
•	.Cudurka sambaba xiranka ee daba dheeraada, cudurka buufsanka kiisaska hawada (emphysema) iyo burukiitada.
.Cudurrada la xariira abuurista carruurta Birth defects ee hooyada cabta sigaarka carruurta ay dhasho ku imaan karo.
•	. Cudurka caadka (Cataracts) ee keena indha la’aanta.
•	.Hawl gabnimada garaadka
•	.Cudurka Alzheimer’s iyo hoos udhaca awoodda waxgarasho. Xasuus la’aan iyo kartida waxgarasho ee dhalinta soo koreyso ee sigaarka cabta oo hoos udhacda.
•	. Yaraanshaha maskaxda (cerebral atrophy)
•	. Tabar darro la xariirta galmoodka (Impotence).
Faa’iidooyinka laga helayo joojinta sigaarka waa mid dhakhso loo helayo, waxaana ka mid ah; cadaadiska dhiigga, garaaca wadnaha iyo heerkulka ayaa caadi ku soo laabanayo, halista inuu wadnuhu istaagana hoos ayay udhaceysaa; waxaana soo hagaagaya kartida wax dhadhaminta, urta iyo wareegga dhiigga ee qofka cabba sigaarka.
1-	Cudurrada wadnaha iyo wareegga dhiigga:-
Sigaarku waxa uu kor uqaadaa fursadaha cudurrada wadnaha. Walxo badan oo buurida ku jira ayaa waxa ay horseedaan inay ciriiri noqdaan xididdada dhiigga qaada, iyadoo kor ukacdo suurtogalnimada inay xidhmaan, sidaana uu wadnuhu ku joogsado ama uu dhiig ku firmo maskaxda. Marka la tixraaco diraasad ay sameeyeen koox caalami ah oo cilmibaarayaala, dadka da’doodu ka yar tahay 40 jir waxa ay 5 jibbaar halis uyihiin inuu wadnuhu joogsado haddii ay sigaar cabbaan .
Sigaarka waxa uu isku dhexyaac ku keenaa garaaca wadnaha, waayo waxa uu sababaa sii daynta Adrenaline, waxaana la ogaaday in dadka sigaarka cabba uu ku badanyahay mootul qaflaha iyo cudurka loo yaqaan Angina, waayo dhiig xinjir ah ayaa waxa uu xiraa xididdada wadnaha quudiya ee loo yaqaan ”coronary arteries”, waxaa kale oo ku badan in jirka qeyb ka mid ah qallasho, kaddib marka ay xinjir xirto xididdo muhiim ah oo quudiya qeybo maskaxda ka mid ah. Sidoo kale sigaarka waxa uu sare uqaadaa garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiigga, waxaana sidaa ku dhaca cudurka dhiig karka.
Waxaa laga yaabaa in xaaladda ugu daran ee sigaarka iyo buuridu ku keenaan afka ay tahay kansarka afka. Si kastaba ha ahaatee, sigaarku waxaa kale oo uu afka ku keenaa cudurro kale oo horay loogu gooni yeelay dadka sigaarka cabba, sida xanuunno ku dhaca unugyada ku wareegsan ilkaha (periodontitis), oo lala xariiryay dadka cabba sigaarka ama cabbi jiray. Buurida kale ee aan sigaarka ahayn waxa ay keentaa ciridka oo burbura iyo nabarro ka soo baxa xuubka qafiifka ah ee ku dahaaran afka. Ilaa 90% dadka laga helay xanuunka unugyada ku wareegsan ilkaha oo aan ku biskoon hababka caadiga ah ee wax lagu daweeyo waxa ay ahaayeen dad sigaarka cabba.
Sigaarka waa kan ugu muhiimsan waxyaabaha midabka uyeela ilkaha, waxa uuna ur qurmuun uyeelaa afka. Waxyaabaha kale ee loo aaneeyo sigaarka waxaa ka mid ah: xanuunka loo yaqaan (leukoplakia) oo ah nabarro cad cad oo ka soo baxa xuubka jilcan ee ku dahaaran afka iyo nabarro yar yar oo midab beey ah leh kana soo baxa dhanxanaga (smoker’s palate). Waxaa taa sii dheer in badan oo dadka sigaarka cabba ka mid ah ayaa lagu arkay inay waayeen dareenka dhadhaminta iyo isbedel ku yimaada dhareerka. Ilkaha oo daatana waxa ay 2 ilaa 3 jeer ka sarreeyaan dadka aan sigaarka cabbin.
3. Habdhiska jidh kaadida:-
Diraasado la sameeyay ayaa isku xiray cabidda sigaarka iyo jileeca lafaha dumarka, waxaana loo aneeyay waxyaabo ku jira samaysanka sigaarka. Waxaa kaloo jirta xaqiiq ah in dumarka cabba sigaarka ay ka hor gaari ogyihiin dumarka aan cabbin da’da ilma goynta.
Waxaa jira caddaymo isa soo taraya oo sheegaya halista buuridu u leedahay shahwada ragga iyadoo disha unugyada manida. Sidaa awgeed ayaa dawladaha qaar waxay ka codsadeen warshadaha sameeya sigaarka in digniin lagu dhejiyo baakadda sigaarka. Cabbidda sigaarka waxa uu sare uqaadaa qaadashada curiyaha cadmium la yiraahdo, waayo geedka tubaakada waxa uu dhulka ka soo nuugaa curiyaal bir ah. Cadmium kiimikaad ahaan waxa uu lamidyahay Zinc, waxaana laga yaabaa inuu bedelo Zinc DNA polymerase taasoo dowr muhiim ah ka cayaarta soo saarista shahwada. Zinc inuu bedelo Cadmium hawsha DNA polymerase waxa ay waxyeelo weyn ukeentaa xiniinyaha .
Tiro diraasado ah ayaa muujiyay in isticmaalka tubaakada ay cunsur muhiim ah u tahay dhicinta lama filaanka ah ee dumarka uurka leh ee sigaarka cabba, iyo inay halisyo kale oo badan ukeenayso ilmaha uurka jiifa. Cabidda darajada labaad ee sigaarka waxa ay halis lamid ah ku leedahay uur jiifta, sida ay sheegtay diraasad in ” cabidda waalidka ee sigaarka waxa ay sii kordhisaa halista in xilli hore uu waxyeeloobo uurka” .
Sigaar cabidda darajada labaad waxaa lala xariiriyay xaaladda dhimashada deg degga ah ee dharab ku jirta loona yaqaan SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). Ilmaha yar yar ee u dhinta xaaladdan ayaa la ogaaday inay sambabadooda ku jiraan xaddi sare oo nicotine iyo cotinine ah, kana sareeya kuwa udhinta sababo kale. Cabbidda sigaarka hooyada inta ay uurka leedahay waxa uu kor uqaadaa halista SIDS, iyadoo carrruurtuna marka ay dhashaan ubanbaxaan sigaarka darajada labaad ay iyana keento halista SIDS, xataa haddii uunan waalidku cabbin sigaarka inta ay uurka ku jireen ilmaha. Nicotine ka ka yimaada sigaarka waxa uu ka gudbaa caanaha hooyada ee naasaheeda ku jira, sidaa ayuuna carruurta ku gaaraa nicotine ka.
Culimadi hore ee muslimiinta ee waa weynaa kama aaney hadlin tubaakada, maadaama ay tahay wax dunida ku cusub oo dhowr qarni uun laga joogo marki uu billawday isticmaalkeeda, balse fuqahada mucaasariinta ah ayaa inbadan ka hadlay aaraa’ fara badana ka dhiibtay, isagoo mid walba uu ku salaynayo sida uu ufahmay waxyeelladeeda.
Diinta islaamka si guud ayay uga hadashay waxyaabaha xaaraanta ah; culimada fiqhiga ee diinta islaamka dhowr ra’yi ayay ka kala qaateen sigaarka, qaarbaa yiri waa xaaraan, qaarna waxa ay yiraahdeen waa karaahi, halka qaarna ay ku gaabsadeen inaaney haynin wax xaaraan ka dhigaya. Balse khilaafyadaa faraha badan ma galaynee waxaan ku soo gaabsan doonaa adillada taabanaysa arrintan ee kitaabka iyo sunnada nabiga (NNKH).
Aayaddaa kor ku qoran waxa uu Alle ku leeyahay: ”naftiina haku ridina halaag”.
[ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً] سورة النساء(29).
[……………. ولا تبذّرتبذيراً* إن المبذّرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً] سورة الإسراء (27).
Micnaha aayaddani waxa weeyaan:” ha ku cayaarin hantida cayaarid, kuwa maalka ku cayaara waa shayaadiinta walaalahood, shaydaankuna waa mid ku kufrin badan rabbigiis”.
Sidaan ogsoonahay sigaarka waxaa uga baxdo dadka cabba lacag aad u badan, tusaale ahaan; waxaa laga yaabaa in qofka sigaarka cabbaya uunan hanti badan lahayn, naftiisana ay ubaahantahay ama carruurtiisa iyo ehelkiisa, taasna diiniyan waa khalad. Xataa haddii uu lacagtaa awooddeeda leeyahay waxaa jira malaayiin muslimiin ah oo ku gaajoonaya dunida daafaheeda, ma daw baa inuu balwaddan ku bixiyo lacag uu gaajada uga bi’in karo kumannaan muslimiin baahan?!!
Eeg xadiiskan ay warinayso hooyada mu’miniinta Ummu salama.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ. سنن أبي داود
”Waxa uu nabigu reebay wax kasta oo wax sarqaamiya, habbisana keenaa”. Xadiiskan ayaa nagaga filan xaaraan noqoshada sigaarka, haddii uunan wax sarqaamin xataa waxa uu keenaa habbiso.
[ الّذين يتّبعون الرّسول النبيّ الأمّيّ الّذي يجدونه مكتوباً عندهم فى التّوراة والإنجيل يأ مرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطّيّبات ويحرّم عليهم الخبآئث ………………..الآية] سورة الأعراف (157)
Ilaahay wuxuu yiri: “Kuwa raacaya Rasuulka, Nebiga ummiga ah oo ay agtooda ka helayaan, isagoo ku qoran Tawraadda iyo Injiilka, kaasoo faraya waxa san kana reebaya waxa xun, una xalaalaynaya waxyaalaha wanwanaagsan kana xarrimaya waxyaalaha xunxun”.
1- Xasuuso waxa ay diinta ka qabto sigaarka, noqona qof leh karti iyo go’aan adag, hana iska dhaadhicin inaadan awoodin joojintiisa.
9- Usheeg ehelkaada iyo asaxaabtaada go’aanka joojinta sigaarka ee aad gaartay.
12- Booqo xarumaha la dagaallanka sigaarka iyo hay’adaha ku shaqada leh arrimahaas, si aad talooyin dheeraad ah uga soo heshid.
15- Ogow in dadka sigaarka cabba kan ugu guusha badan uu yahay kan joojiya sigaarka, haddii aad mar ku sidbato oo aad xabbad qac ka siiso qaado go’aan inaadan xabbad labaad unoqon weligaa.
Marka aad damacsantahay joojinta sigaarka, sameyso qorshe howleed gaar ah, dadkana usheeg inaad doonayso joojinta sigaar cabbidda, weydiisana inay gacan kaa siiyaan go’aankaada sidaad ku fulin lahayd, iskuna day inaad raacdo talooyinkan hoos ku qoran:-
i. Qor liis ay ku qoranyihiin faa’iidooyinka caafimaad ee aad ka helaysid joojinta sigaarka, kuna dheji meel kuu muuqata sida darbi, talaajadda dusheeda ama meel kasto oo ay ishaadu mar kasta ku dhacayso.
vii. Noqo qof go’aan adag leh, hana is dhiibin haddii aad mar qaldanto, xasuusnawna in inbadan oo dadki sigaarka horay ucabbi jiray ah aaney ku guulaysan joojintiisa illaa isku daygi labaad ama seddexaad kaddib mooyee.
Faa’iidooyinka joojinta sigaarka
Si kasta oo uu qofku u caafimaad daran yahay, joojinta sigaarka waxa ay dheeraynaysaa cimrigaaga, noloshaadana way kuu hagaagaysaa, bal ila eeg faa’iidooyinka hoos ku qoran:
2. 8 saacadood kaddib, waxa uu dhiiggaagu awoodayaa inuu soo qaado oksajiin fara badan, kaddib marka la baabi’iyo nus ka mid ah CO iyo nikotiinka ku jiray dhiiggaaga.
Gabo gabo iyo Gunaanad
Ugu dambayn waxaan ka codsanayaa cid walba oo akhrisa qormadan inay ugudbiso qof ay taqaan ama ay jeceshahay oo isticmaala balwaddan, si uu uga faa’iidaysto talooyinka iyo aqoonta ku jirta qormadan gudahiisa.
Qoraalka oo Sawirro wata ka daalaco: Qaab Magazine ah ama PDF
Faafin: SomaliTalk.com 10-10-10
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: Caafimaad, sigaar